शुक्रबार ११ , भाद्र २०७८ Tamor Khabar 936
१४औँ महाधिवेशनको तयारीमा रहेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले डेढ वर्ष लगाएर बल्ल क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाएको छ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यद्वय मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सम्मिलित कार्यदलले सदस्यताका विषयमा देखिएका बाँकी विवादलाई लामो रस्साकसीपछि टुंगो लगाएर सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ। यससँगै कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विवाद किनारा लागेको छ।
१३ माघ ०७६ मा पहिलो पटक महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउँदा चार महिनाभित्र क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउने मिति तोकेको थियो। तर, त्यसको १५ महिना ढिला गरी सदस्यताको टुंगो लगाएको छ।
यसबीचमा सदस्यताकै कारण तीनपटकसम्म तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन भने नेताहरूले त्यस्तो कार्यतालिकामा दर्जनौँ पटक हेरफेर गरे।
क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगिएपछि अब वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि बाटो खुलेको छ। अब सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यताको नामावली हस्ताक्षर गरी अन्तिम रुपमा निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ।
कार्यतालिका अनुसार १८ भदौमा वडा अधिवेशन गर्ने भनिएको छ। तर, त्यो मिति आउन ७ दिन मात्रै बाँकी छ।
यस्तै, २७ भदौमा पालिका अधिवेशन, १ असोजमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, ५ असोजमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति र एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन तथा १० असोजमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
यसरी दसैं अगाडि नै देशभरबाट चार हजारभन्दा बढी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने लक्ष्य छ, कांग्रेसको।
योसँगै पाँचथरमा पनि नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि टोल-टोलमा अधिवेशनको रौनक सुरु भइसकेको छ। अधिवेशनको रौनक साथै जिल्ला तथा केन्द्रीय नेताहरु गाँउ-गाँउमा कार्यकर्तालाई जर्गेना गर्ने होडबाजी नै चलेको छ।
यसैबीच, पाँचथर जिल्ला क्षेत्रिय सभापतिको लागि नगेन्द्र लामाको पनि दौडधुप बढेको छ। कार्यकर्ता र जिल्लाका नेतालगायत केन्द्रीय नेताको राम्रो साथ लामालाई रहेको छ।
वडा अधिवेशन २०७८/०५/१८
गाँउ/नगर अधिवेशन २०७८/०५/२७
प्रदेश क्षेत्र क/ख २०७८/०६/०१
सक्रिय निर्वाचन क्षेत्र २०७८/०६/०५
जिल्ला अधिवेशन २०७८/०६/१०
प्रदेश अधिवेशन २०७८/०६/१०/१२
केन्द्रीय अधिवेशन २०७८/०८/०९/१३
को हुन् नगेन्द्र लामा ?
पाँचथर जिल्ला मिकाल्ला जुङ गाँउपालिका- ८ (साविकी दुरदिम्वा गा. वि. स.)मा २०२५ असार २५ गतेका दिन बुवा दलबहादुर लामा र आमा नरमायाको कोखबाट मध्यम वर्गमा जन्मिएका लामा स्थानिय विद्यालयबाट पाँच कक्षासम्म अध्ययन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उनले छिमेकी जिल्ला मोरङबाट २०४६ सालमा एसएलसी उत्तिर्ण गर्नुभएको थियो।
सानै उमेरबाट नै राजनीतिबारे चासो लिने लामा कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) र नेपाल तरुण दल हुँदै १३ औं माधिवेशनबाट क्षेत्रिय सचिव पदमा रहेर काम गर्नुभयो। उहाँ लामो समयदेखि राजनितिकका साथसाथै सामाजिक काममा पनि अग्रसर हुँदै आइरहनु भएको छ।
अहिले कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरण गर्दै जाँदा युवाहरुको नेतृत्वलाई पार्टीले स्वागत गर्दै जानुपर्छ भन्ने आम धारणा छ। तर, युवाहरुको कुरा गर्दैगर्दा विगतमा राजनीतिमा ठूलो योगदान बनाएका वा इतिहास रच्नु भएका अग्रज पुस्ताहरूलाई बेवास्ता गरेर जान सकिँदैन।
यसकारण युवाहरुको नाममा अग्रज पुस्ताहरूलाई 'डिमोरलाइज' गर्ने वा अग्रज पुस्ताहरुको नाममा युवाहरुलाई 'डिमोरलाइज' गर्ने दुवै विषयवस्तु हुन सक्दैनन्। त्यसैले क्षेत्रिय सभापति भए पार्टीको अग्रज नेतालाई सम्मान साथै नयाँ क्रियाशिल सदस्यहरुलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन प्रोत्साहन गर्ने योजना सुनाउनुहुन्छ लामा।
'म क्षेत्रिय सभापति भए पछि पार्टीमा भावानात्मक रुपमा एकता कायम गर्दै पार्टीको अग्रज नेतालाई सम्मान साथै नयाँ क्रियाशिल ससदस्यहरुलाई नेतृत्वमा लैजान प्रोत्साहन गर्छु,' तमोर खबरसँग कुरा गर्दै लामाले भन्नुभयो,'पार्टीको निर्देशन अनुसार सबैलाई चलाएमान गर्नेछु।'